शिवहरिको ‘लक्का जवान’ निर्माणको घोषणा, कलाकारमा दिलिप–प्रियंकादेखि वर्षा–सलोनसम्म
काठमाडौं । हास्य कलाकार शिवहरि पौड्यालको लेखन/निर्देशनमा सिनेमा ‘लक्का जवान’को निर्माण हुने भएको छ । बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गर्दै सिनेमा निर्माणको औपचारिक घोषणा गरिएको हो । धुप्र पन्त प्रस्तुतकर्ता रहेको सिनेमामा किरण केसी, दिलिप रायमाझी र शिवहरि पौड्याल कार्यकारी…
कंगना होइन तापसी हुन् बलिउडकी असली ‘क्विन’
मुम्बइ। तापसी पन्नुले विगत केही वर्षमा आफ्नो फिल्मोग्राफीबाट आफ्नै दर्शकवर्ग स्थापित गरिसकेकी छिन् । दक्षिण भारतीय फिल्मबाट करिअर सुरु गरेकी तापसीले बलिउडको मूलधार र अफबिट फिल्मबीचको दूरी कम गराउन सफल भइन् । कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेकी तापसीको लागि स्क्रिप्ट सबैभन्दा महत्वपूर्ण…
सुनील ग्रोवरको सार्वजनिक भएको संघर्षको कथा, ५०० कमाउथे प्रति महिना
मुम्बई। चर्चित कमेडियन तथा बलिउड कलाकार सुनील ग्रोवर अहिले बलिउडमा स्थापित नाम हो। तर, यहाँसम्म आइपुग्न सुनीलले गरेको संघर्षको कथा निकै मार्किक छ। एउटा सामाजिक संजाल प्लेटफर्मसँग कुरा गर्दै उनले आफ्नो बारेका बाहिर नआएको कुरा सुनाएका छन्। उनले भने–म अभियन…
साहोका फ्यानलाई प्रभासको ठूलो सरप्राइज गिफ्ट !
काठमाडौं। प्रभास र श्रद्धा कपूरको फिल्म साहो यस वर्षका ठूला फिल्ममध्येको एक हो । यो फिल्मको प्रतिक्षामा करोडौं फ्यान छन् । फिल्मको टिजर केही समय अगाडि रिलिज भएको थियो । टिजर रिलिजपछि फ्यानको उत्साह अझै बढेको छ । फ्यानहरु प्रभास…
बलिउड डुब्यो शोकमा, कहकशां पटेलीकी श्रीमानको निधन
मुम्बई। पूर्व बलिउड चर्चित अभिनेत्री कहकशां पटेलका श्रीमान आरिफ पटेलको अल्पायुमै निधन भएको छ। ४७ वर्षका आरिफको हृदयघातबाट निधन भएको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन्। आरिफले पूर्व अभिनेत्री कहकशां सँग विवाह गरेका थिए। आरिफको अचानक निधन भएपछि बलिउडमा सन्नाटा छाएको छ।…
बलिउड अभिनेत्री सुस्मिता सेन विवाह गर्दै
मुम्बइ। बलिउडमा अभिनेत्री सुस्मिता सेन र रोहमन स्वालको प्रेम धेरै चर्चामा रहन्छ। यो जोडिलाई धेरै मन पनि पराइन्छ। यी दुवैलाई सामानिक सञ्जालमा एकअर्काप्रति माया प्रर्दशन गर्दै गरेको देखिन्छ। यो जोडीलाई एकैसाथ देख्‍न थालिएको एक वर्ष भयो। लामो समयको डेट पनि…
अमेरिकामा बस्ने नेपालीले ल्याए नेपाली गीत ‘योद्धा’ (भिडियो)
काठमाडौं। बाल्टिमोरमा धेरै नेपाली कलाकारहरुको बसाेवास रहेको नौलो कुरा त हैन, तर अहिले अमेरिकामै बसेर आफ्नो सांगीतिक जीवन स्थापना गर्ने युवाहरु पनि यहाँ देखिन थालेका छन्। तिनै युवाहरु मध्येका एक जल्दा बल्दा कलाकार हुन् रव (गौरव) सिटौला । रव सिटौला एक गायक मात्र…
काठमाडौं । लोकदोहोरी क्षेत्रमा स्थापित गायिका हुन् सुनिता दुलाल । झण्डै दुई दशकदेखि गायनमा सक्रिय सुनिताका दर्जनौं गीत लोकप्रिय छन् । सुनिता गीतको संख्याभन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छिन् । त्यसैले उनका गीत भड्किलो लाग्दैन् । सुनितालाई स्रोता,…
उदित नारायणलाई धम्की दिनेले के–के भन्छन् ? गायकले बताए सबै कुरा
मुम्बइ। बलिउड गायक उदित नारायण झालाई ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको छ । धम्की आएपछि उनले अम्बोली पुलिस स्टेशनमा उजुरी दिएका छन् । उनलाई विगत २ हप्तादेखि धम्कीपूर्ण फोन आइरहेका छन् । हालै एक कार्यक्रममा उदितनारायणले आफूलाई धम्की दिनेले के–के भन्छन्…